Uummatni Oromoo Kokkee Qabees Gad Nama Busuu Beeka – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooUummatni Oromoo Kokkee Qabees Gad Nama Busuu Beeka
Uummatni Oromoo Kokkee Qabees Gad Nama Busuu Beeka.
Damee Boruu: Caamsaa 31, 2020
Uummanti Oromoo dhiiga isaa lolaase gatitti isa itti baatee Kononeel Abiyi akkuma aangoo itti ol isa baase kokkee isaa qabee gad buusuu akka danda’u daqiiqaa tokkoof illee dagachuu hin qabu. Gad isa buusuu duwwaa utuu hin taane haammeenya irraan gahaa jiruuf seeraan akka gaafatamu qabus hubachuun barbaachisaa dha. Bakkee dhiigni ilmaan Oromoo bilisummaaf akka bishaanii dhangala ture itti qaanii tokko malee bakka bishaan daakan ijaarachuuf xiyyeefachuun salphina guddaa dha. Namni kun beekaa of fakkeessuu utuu mana barumsaa hin dhaqiin dooktrumaaa bara Wayyaanee raabsamu fanifatee hojii daa’imaa raawwaachuaa guyyaa guyyaan saaxila of baasa jira.
Uummata Oromoof irraa tuffii guddaa qaba.Tuffiin isaa kun kan Uummata Oromoo xiqqeessuu fi balleessu akka hin taanee hubachuun maaliif isa rakkisa? Aadaa Oromoo keessa kan dhoksaan dukkana keessa hasaasanii hojjetan hin jiru. Uummatni Oromoo wal dura taa’ee addaa fi adda itti walitti ifaan dubbatee walii gallee waan hojjetu hojjeta.Wal ganuun, wal sobuun, walitti maluun wal balleesuun aadaa Oromoo keessa hin jiru. Rakkinni duraa Uummatni Oromoo warra Habashaa wajjin qabu aadaa isaani irraa dhufa. Aadaa isaanii nama ganuu, nama sobuu, nama itti maluu fi shiraa xaxuun nama dhabamsiisuun kan guutame tahuu isaa ti.
Mootonni Habashaa darbaa darbiin gootota Oromoo kan dhabamsiisaa yoona gahan malaamaltummaa araaraa fi nagaa buusuu akeeka jedhu jala dhokatanii akka tahee seenaan isaanii fi Uummata Oromoo jidduu jiru ni mirkaneessa. Namni Oromoo maqaa araaran kan dhufu dhugoomsee ni fudhata. Wal galtee godhamuus ni kabaja. Habashoonni karaa fuula duraa waa’ee araraa fi nagaa busuu dubachaa kara dubaa boola nama qotu. Kononeel Abiyi nama Wayyaanee jalatti gantuu fi gaaduu tahee ilmaan Oromoo fixaa ture uummatni Oromoo dhiifama godheef aangoo itti ol baase. Inni garuu uummata galatoomi jechuu irraa ilmaan nafxanya fi Diqaalota Habashaan ammatamee Uummata Oromoo nagaa jaalatu duguugee lafa balleessu akeeka duraa godhate ka’uun baayyee nama ajaa’iba.
Utuu Kononeel Abiyi nama beekaa tahee Uummata Oromoo itti hirkatee aangoo jabeefatee rakkina biyya Impaayeera Itoophiyaa keessa jiruuf iyyuu furmaata fiduuf ayyaana qabaata. Gaafa hudduu ilmaan nafxanyoota fi of tuultotaa Amhaaraa jala deemee Uummata Oromoo sabaa fi sab-lammii Impaayeera Itoophiyaa keessa jiran irratti maluu eegalee qabee aangoo isaa irra-gadi sigigaachaa jira. Adda duraan Uummatoota Oromoo, Benishaangul, Sidaamaa fi Qimaant fixuun dogongora guddaa dha.
Dhaabni nageenya biyya lafaaf falamu (Amnesty international) torbee darbee dhumaatii Oromiyaa keessattii fi naannoo Amhaaraa Gondor keessatti tahaa jiru raga wajjin gabaasee jira. Namni keenya baayyeen Gondor keessa kan jiraatu Uummata Amhaara jedhee Yaada. Kanaafuuf Kononeel Abiyi Uummata Amhaaraas akka Oromoo fixaa jira jedhee kan fudhatu baayyee dha. Kan RIB fi Liyuu Poolisiin Amhaaraa Gondor keessatti fixxan Uummata Qimaant jedhamu. Uummatni Qimaant dhumaa jiru kun aadaan, afaanii fi eenyummaan isaa balleessanii akka gulantaa lamaffaa(second citizen) Amhaaraa godhamee jiru dha.
Kan baayyee nama rifachiisuu fi nama yaadedessu ijaarsonni Amhaaraa gabaasaa dhumaatii Uummata Qimaant yaroo dura dhaabbatanii balaalefatan arguu dha. Maabara Amhaaraa Ameerikaa jiranii fi ijaarsi Abiin (NaMa) jedhamtu gabaasaa Aminstii Internaashinalii baase dura dhaabbachaa jiru. Haalli kun baayyee nama rifachiisa. Baayyees nama yaadeessa. Of tuultonni Amhaaraa aangoo deebifachuuf jecha hammeenyi Mootummaan Kononeel Abiyi degaraa fi jajjabeessaa jiru. Warrii kun Mootummaa amma jiru kana qabatanii Uummata Impaayeera Itoophiyaa keessa jiru fixxuu fi ficisiisuu irraa akka hin dhaabbanne haalli kun raga dha. Mediyaan hawaasaa Habashaa tahee fi ijaarsonni isaanii dhumaatii Oromoo kaasuu hin fedhan. Karaa biraa Mootummaa kana gargaaraa fi duguggaa sanyi inni Uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru faarsaa jiru.
Mootummaa kana adda duraan kan gargaaraa jiru mana amantii isaanii akka tahe dagatamuu hin qabu. Manni amantii Ortoodoksii lafa Uummata Oromoo harka sadii keessa harka tokko seeraan qabaachaa ture. Har’a qabeenya guddaa magaaloota akka Finfinnee keessatti tuulatee of harkaa qabu isaani. Qabsoo Uummatni Oromoo haqa isaa deefachuu godhu ukkaamsuuf waan isaan hin goone hin jiru.Bara baraan maqaa araaraa fi nagaa buusuun gootota Oromoo gowwomsanii lafa irraa ficisiisaa turuu irratti gahaa guddaa qabu. Ammas yaroo mootumichi kufuu isaa argan maqaa araaraa fi nagaa busuu jedhanii shira baran sana xaxxuu ni dhiisu jedhee hin yaadu.
Kana booda waa’een araaraa kan yaadamu warri dhiiga nama dhangalaasaa ture fi jiru aangoo irra bu’aanii gaafa seeratti dhiyaata qofa. RIB dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa jiruuf hunda dura kan itti gaafatamu ajajjaa waranaa kana kan tahee Mumicha Ministeera Kononeel Abiyi. Warri ajaja dabarsanii fi ajjeechaa sukanneessa kana raawwatan isa booda itti gaafatamu. Akksaumma maqaa Mootummaa Naannoo Oromiyaan humna hidhatee Uummata Oromoo goolaa jiru kan bobbaasaa jiru Namicha eegduu Kononeel Abiyi ture Shimalis Abdiisaa akka tahe ifa jira. Booda gaaffa itti gaafatamuun dhufe an kana quba hin qabu jedhanii haaluun hin danda’amu.
Rakknni deddeebi’ee biyyaa Mootummaa Impaayeera Itoophiyaa keessatti mulatu warri aangoo humnaan fudhatu hunduu aangoo sana tiksuu malee seeraa fi heera biyyaa tiksuuf fedha dhabuu dha. Isaanis akkuma warra isaan dura turee qabeenya saammachuu fi nama angoo harkatti qabu hidhuu fi ajjeessu qofa hojiin isaanii. Haalli kun darbaa darbiin uummata Impaayeera Itoophiyaa kana keessa jiraatuuf yaaddoo fi jeequmsa guddaa tahee jira. Uummatni afuura baafatee jiruu fi jireenya isaa gaggeefachuu dhabaa jira. Kanaaf iyyuu gaafa mootummaan kun kufu warra mirga ilma namaa sarbe, nama ajjeessee badii gugguddaa hojjete seeratti dhiyyeessuun tarkaanfii isa duraa tahuu qaba.
Gabaasaa Aminsiitii Internaashinaal gudeedaa, hidhaa fi ajjeechaa uummata Oromoo irratti tahaa jiru ragaa wajjin kan dhiyeesse namni Getaachoo Balchaa jedhamuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa kan hin jirree bakka bu’ee dhugaa miti jedhee Uummata Oromoof ibsa laata. Uummatni Oromoo guyyaa guyyaan badii sukanneessaa kana keessumsiisaa jira. Hidhamaa, gudeedamaa, saamaamaa fi ajjeefamaa kan jiru Uummata Oromoo mataa isaa ti. Gabaasaan Aministii Internaashinaal gidiraa Uummatni Oromoo argaa jiru biyyaa lafaa hubachiisuuf malee Uummata Oromoo barsiisuuf miti. Karaa biraa maqaa Blixingaa kanaan aangoo irra namootni jiran gadadoo akkam akka tahan of saaxilaa jiru. Gabaasa ragaa wajjin dhiyaate tokko lakki namatu waan sobaa nu irratti oddeessaa jira jettee uummata ajjeesaa jirtu itti wakkachuun gatii maalii qaba? Dubbii gabaasaa kanairra jiru falamachuun barbaachisaa tahe guyyaa kana bakka kanatti namni abbaluu jedhamu kun hin duunee jedhanii dhiyyeefachuun waan karaa qabu.
Maqaa covid -19 kanaan uummata of duuba diriirsuun waan hin danda’amneef biyyaa olaa wajjin akka amala isaanii lolaa bananii “Waamichaa Biyyaa Hadhaa Keenyaaf” tokko taanee haa dhaabbannu jedhaanii uummata gowwosuuf akka yaadanii fi yaalan dagachuu qabnu. Gaafa cinqamaan Mootonni Habashaa yoo araaran diina keessa cabsuu dhaban biyya olaa wajjinlola kaasuu akka tooftaa biraatti itti gargaaramu. Seenaa kana duraa kaasuuf bakka hin qabu.Garuu har’a biyya Sudaanii fi Misiraa irratti dibee tumaa fi geeraraa akka jiran qalbiin caqasaa. Of isaanii dura darbanii lola akka hin seene bareechine beekna. Ijoollee uummata cunqursamaa guuranii waraana itti bobaasuun karaa lamaanuu nagaa aregatu. Diinni isaanii isa keessaa fi alaa yaroo tokko itti of irraa cabsu. Malaamaltummaan kun kana dura hojjeteef jira. Ammas yaaluun isanii hin hafu.Garuu Uummata Oromoof diina duraa Mootummaa Kononeel Abiyi, Diqqaalota Habashaa, ilmaan nafaxanyaa fi of tultoota Amhaaraa akka tahe dagachuu hin qabnu.
Hiriyyaan koo tokko makmaaksaa jalatutu jecha kaanaaf hime. “ Amhaaraa sixil injii, si taagel ayitaayiim” nan jedhe. Jecha isaa nan hiika. Amhaarri yaroo kufiisu malee yaroo waldhaansoo qaboo hin argamu jechu dha. Baayye na dhibe. Jecha kana taa’ee itti yaade jennaan waan dhugaa guddaa of keessaa qaba. Lola tokko irratti bobanii gaga’amni isaanii irra gahee beeku. Biyyoo cinanii, shira meeqaa xaxxanii aangoo itti bara baraan akka ol bahaa jiran ni agarra. Aangoo qabachuuf malaammaltummaan deemuu malee waldhaansoo gochuu fi aarsaa itti baasuun isaaniif barbaachisaa miti. Kana gochuuf humna Oromoo keessas tahe alaa isaan wajjin dhaabbatu yoo argatan shira xaxanii wajjin hojjenna jedhanii ergaa aangoo dhufanii booda of keessa haxa’u.
Ijaarsota Oromoo tahan yookan beektotaa Oromoo kan ofiin jedhan biyya keessaa fi alaa WBO jalatti hiriira galuu qabna. Qabsoon Uummata Oromoo yoo WBOn hin hooganamne ammas karaa irraa jalatee Uummata Oromoo gagama’a biraaf dabrsee laata. WBO irraa kan hafe Ijaarsonni Oromoo har’a jiran qabsoo bilisummaa Oromoo bakkaan gahuu humna hin qaban. Seenaa biyya lafa irraa kan argaa fi barachaa jirru qabsoon bilisummaa humna hidhateen yoo utubame malee akka galma isaa hin geenye dha. Qarreen, Qeerroon, Ijaarsonni Oromo beektonni Oromoo fi Uummatni Oromoo bal’aan beekumsa, ogummaa, dandeettii fi qabeenya qabuun yoo WBO tumsinee guyyaan Bilisummaa Uummata Oromoo ni dhiyeessina.